လာမယ့်ရာသီမှာ မန်စီးတီးအသင်း ဘာ့ကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်ကစားခွင့်ရနိုင်တာလဲ? – MySport Myanmar
လာမယ့်ရာသီမှာ မန်စီးတီးအသင်း ဘာ့ကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်ကစားခွင့်ရနိုင်တာလဲ?
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အင်အားကြီးအသင်း တစ်သင်းဖြစ်သလို အသင်းပိုင်ရှင် ရှိတ်မန်ဆော် ရဲ့ ဓနအင်အားကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့ရာသီတွေမှာ ထင်တိုင်းကြဲလေ့ရှိတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့ UEFA ရဲ့ နာမည်ကျော် ဘဏ္ဏာရေးစည်းမျဉ်း FFPကို အတုအယောင် စပွန်ဆာစာချုပ်တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင်လုပ်ခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ချခံရပြီးနောက်မှာတော့ UEFAရဲ့ စုံစမ်းမှုကို ခံရအပြီး ဥရောပရဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဥရောပ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ကစားခွင့်ကို နှစ်နှစ် ပိတ်ပင်ခံထားရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အဆိုပါ ပြစ်ဒဏ်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အားကစားတရားရုံးဖြစ်တဲ့ CASထံကို လျှော့ပေါ့ပေးဖို့ အယူခံဝင်ထားပါတယ်။
မန်စီးတီးအသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရတာကြောင့် လက်ရှိရာသီရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ အဆင့်ငါးရရှိတဲ့အသင်းဟာ လာမယ့် ဘောလုံးရာသီမှာ မန်စီးတီးအစား ချန်ပီယံလိဂ်ကို ဝင်ရောက်ကစားခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သတင်းဟာ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်ယူ ၊ လန်ဒန်အခြေစိုက်အသင်းတွေဖြစ်တ​ဲ့ အာဆင်နယ် ၊ စပါး စတဲ့ ထိပ်တန်းအသင်းတွေအပြင် လက်ရှိရာသီမှာ ခြေစွမ်းကောင်းနေတဲ့ ရှက်ဖီးလ် ၊ ဝုဗ်စတဲ့အသင်းတွေအတွက်ပါ သတင်းကောင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် International Sports Law Journal ရဲ့ အယ်ဒီတာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖလာနာဂန်ရဲ့ အဆိုအရတော့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ လာမယ့်ရာသီမှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိနိုင်သေးတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဖလာနာဂန်က မန်စီးတီးအသင်းဟာ CASထံ အယူခံဝင်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဟာ လက်ရှိအချိန်အထိ အတည်ပြုလို့ မရသေးကြောင်း ၊ CASကလဲ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ပြစ်ဒဏ်အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို အစကနေ ပြန်လည်စစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အဆိုပါအယူခံနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ချက်ချင်း ဆုံးဖြတ်ပေးလို့ မရကြောင်းနဲ့ အကယ်၍ UEFA ကသာ မန်စီးတီးအသင်းကို လာမယ့်ရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကနေ ထုတ်ပယ်လိုပါက ဇွန်လ ၁ရက်နေ့မတိုင်မီ CASရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ရရှိအောင် ကြိုးစားရမှာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားပြီး ဇွန်လ ၁ရက်နေ့အထိ CASရဲ့ အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်မလာခဲ့ပါက မန်စီးတီးအသင်းဟာ စည်းမျဉ်းတွေအရ လာမယ့်ဘောလုံးရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
MySport Myanmar2020-03-06T13:31:49+06:30March 6th, 2020|Champions League, Football, Premier League|